Fakafaka : vaovao ny taona, hanova paika sa hitazona ny nahazatra ? | NewsMada
Fakafaka : vaovao ny taona, hanova paika sa hitazona ny nahazatra ?
Manomboka ho avy tsikelikely ato ho ato ireo fanamarihana na fankalazana samihafa eo amin’ny tontolon’ny kolontsaina. Misy ny iraisam-pirenena toy ny « Andro iraisam-pirenena ho an’ny tenindreny », « Andro maneran-tany ho an’ny vakoka ». Ao kosa ny finiavan’ny fikambanana na sampandraharaha isan-tsokajiny tahaka ny « Iray volan’ny teny malagasy », « Herinandron’ny kabary », sns. Mitaky ezaka sy finiavana ary fandavantena goavana vao tontosa ny hetsika tahaka ireny.
Vaovao ny taona. Hanova paika sa hitazona ny nahazatra hatramin’izay ny mpikarakara ? Sao mila velarina kokoa amin’izay ny sehatra ? Sarotsarotra saingy tsy maintsy hatrehina raha te hahita vokatra lehibe atsy aoriana atsy. Raha eo amin’ny sehatry ny teny malagasy, ohatra, tokony omena fiofanana matetika ny mpampianatra taranja malagasy. Hatsangana tsikelikely ny komity isan-tsehatra hametraka ny lanja aman-kasin’ny teny malagasy. Omena vahana ireo karazana fifaninanana momba ny teny malagasy.
Mety ho sarotra ny fanatanterahana ireo raha tsy miara-mientana ny rehetra. Sao mba tsindrina mafimafy kokoa hatrany ny fanatonana ny mpandraharaha sy mpanam-bola, mba hanohana ny kolontsaina sy zavakanto malagasy ? Mila ezaka sy fandresen-dahatra goavana io fomba fiasa io…
Ezaka takiana amin’ny fikambanana na rantsamangaika ireo fa ny ezaka ataon’ny Malagasy tsirairay isam-batan’olona no tena tsara. Tsy mila itadiavana famatsiam-bola na fanohanana avy atsy sy aroa ny finiavana miteny malagasy. Mila ovaina ilay toe-tsaina tia manompo ny zava-bahiny, dia ampy !
Andramo ao anatin’ny andro iray ny miteny malagasy madiorano. Ampitomboy tsikelikely… Afaka andro vitsivitsy, hiverina ny fitiavan-tanindrazana eo amin’ny Malagasy. Tsy ho azo ambakaina sy ho fitafitahina intsony izy amin’izay !